२०७९ जेठ २५ गते बुधबार नजिक न्युज संवाददाता
पछिल्लो समय प्रचारप्रसार व्यापक बनेसँगै यहाँ समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेश र देशभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आकर्षण बढेको छ। यसकारण खप्तड गंगा–दशहरा मेलालाई पछिल्लो समय देशकै ठूलोमध्ये एक धार्मिक मेलाका रुपमा लिन थालिएको छ।
दार्चुलामा जलेको अवस्थामा महिलाको शव फेला, २ जना नियन्त्रणमा
दुई जनालाई सोधपुछको लागि नियन्त्रणमा लिइएको दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र कार्कीले बताए। घटनाको अनुसन्धानका लागि दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्ट नेतृत्वको टोली घटनास्थल प्रस्थान गरेको छ।
अछाममा किशोर मृत्यु प्रकरण: पोष्टमार्टमका लागि शव उठाउने सहमति
मृतक किशोरका आफन्तले काँग्रेसको योजना अनुसार हत्या भएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचनका क्रममा शाही एमालेको प्रचारमा सक्रिय थिए। सोही कारण उनको हत्या भएको आरोप आफन्तले लगाएका छन्।
बञ्चरेडाँडामा तनाव, प्रहरीले हान्यो अश्रुग्यास
मंगलबारदेखि प्रहरीको सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरिएको थियो । तर बुधबार पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले केही राउण्ड अश्रुग्यास हानेको उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले विज्ञप्ति जारी गरी ३ दिनभित्र विश्वविद्यालयको काम सञ्चालन नभए अनेरास्ववियुले ताला फोड्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
दानसाँघु र बाउलीमा बेलिब्रिजको माग गर्दै बुढीनन्दाका नगर प्रमुख बोहरा पूर्वाधार कार्यालयमा
२०७९ जेठ २४ गते मङ्गलबार नजिक न्युज संवाददाता
जवाफका पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख रुद्र बोगटीले आवश्यक प्रक्रिया र बजेट बारे छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन् । कोल्टी क्षेत्रका बासीन्दाको समस्याको साधानका लागि नगर प्रमुखले दिएको चासो र चिन्तामा आफूहरु गम्भीर रहेकोले संभव भए पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचन पुनः गर्नुपर्ने निर्णय गरेको र यो निर्णय कानुन सम्मत नभएको जिकीर गर्दै एमाले सांसद लालबहादुर थापाले राजीनामा मागेका हुन् ।
बडीमालिकामा मार्तडी सरसफाइ कार्यक्रमको सुभारम्भ, नगरप्रमुख नै जुट फोहर उठाउन
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा नगरप्रमुख अमरबहादुर खड्का, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द अधिकारी, डिएसपी सुर्य थापा, वडा अध्यक्षहरु, नगरपालिकाका कर्मचारी, र सुरक्षाकर्मीहरुले बजारमा सरसफाई गरेका छन् ।
बडीमालिकाको पानीनाउँला जलवायु उत्थानशिल गाउँ घोषणा
स्थानीयलाई सहास नेपाललले धान चुट्ने मेसिन, मौरीका घार सहीतका दर्जनौ कृषिका सामाग्री पनि सहयोग गरेको छ । स्थानीयले टोललाई थप सुधार गर्न पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । फोटो ः घोषणा कार्यक्रममा कृषि सामाग्री हस्तान्त्रण गर्दै, नगर प्रमुख अमर खड्का ।
जिन्दगिमा तिम्रो प्यार मिल्छ...
जिन्दगिको मोडमा भाग्यको बारेमा सोच्दछु अहिले
सीमा नाकामा पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना गर्दै सुदूरपश्चिम सरकार
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने प्रदेश सरकारले बताएको छ। पाठकले भने, ‘पर्यटक सूचना केन्द्र हामीसँग छ। तर सीमा क्षेत्रमा पर्यटक सहायता कक्ष छैन। सहायता कक्षमा नीजि कम्पनीका प्रचाहरु पनि हुन्छन्। राख्ने ठाउँहरु हामी बनाउछौ।’
अछाममा शाही हत्या प्रकरणः कुकुरसहित घटनास्थल पुग्यो अनुसन्धान टोली
कृष्ण शाही, निराजन शाही, हिम्मत शाही, कमल शाही, भद्र शाही, राजेन्द्र शाही र विनोद शाही फरार भएको डीएसपी रविराज थपलियाले बताएका थिए। मध्यरात कांग्रेस जनप्रतिनिधिसँगको साँठगाँठमा प्रहरीले घरमा हस्तक्षेप गरेलगत्तै बेपत्ता भएका विनोद शाहीको शव हिजो भेटिएको हो।
प्रधानमन्त्री देउवाको हातमा पुग्यो नेकपा एसका नयाँ मन्त्रीको नाम
नेकपा एसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ अनुहारमा जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर र हीराचन्द्र केसी छन् । अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई सोही मन्त्रालयमा फुलमन्त्री दिन लागिएको छ ।
तेस्रो पटक आयोगले बाजुरा अदालतका श्रेष्तेदार पुष्पराज पाण्डेलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको थियो। व्यक्तिगत कारण देखाउँदै पाण्डे पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पन्छिएपछि आयोगले चौथो पटक कठायतलाई तोकेको हो।
कक्षा–१ देखि ३ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो बडीमालिका पढाई हुने
स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो बडीमालिका पुस्तक पढाईले स्थानीय आवश्यककता परिपुर्ति हुनुका साथै सिकाईप्रतिको समेत विकास हुने देखिन्छ । पाठ्यक्रममा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचान समेत समेटिएको छ ।
स्याउले उकासेको उर्थु गाउँ
उर्थु गाउँमा स्याउको आम्दानी लिने उनी एक्ला छैनन् । यहींकी एलिसा बुढा स्याउ बेचेर वार्षिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ कमाउँछिन् । त्यसबाट उनले दुई सन्तानको जीवन बिमा गरेकी छन् । ‘स्याउको कमाइले बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन् ।
अब हामी चाँडै नै टेन्डर गर्छौं,’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक ३ सय मिटरमा एउटा र सार्वजनिक स्थानमा ५० जना बराबर एक शौचालय हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
हाफ म्याराथनमा महिलातर्फ बाजुराकी राजपुरा पछाईं प्रथम
‘जलवायु परिवर्तन’ नाराका साथ कान्तिपुर हाफ म्याराथनको दसौं संस्करणमा महिला र पुरुष दुवैको २१.१ किमिको हाफ म्याराथन, कर्पोरेट दौड (५ किमि), ह्विलचियर रेस (३ किमि) गरी तीन विधामा प्रतिस्पर्धा भएको हो ।
बाजुराको बडिमालिका–१ पिनालेखको एक घरमा आगलागी
२०७९ जेठ २२ गते आइतबार बाजुरा विशेष
घरमा आगलागी हुदाँ ३ कट्टा गहुँ, लत्ता कपडा र भाडकुँडा जलेर नष्ट भएको स्थानीयले जानकारी दिएको छ । घरमा लागेको आगो केही समयपछि स्थानीयको सक्रियतामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अछाममा किशोर मृत्यु प्रकरण : तालिम प्राप्त कुकुरसहित सीआईबी टोली खटियो
पछि कांग्रेस कार्यकर्ताले दिएको जाहेरीका आधारमा १७ जेठमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा अवरोध गरेपछि दोहोरो झडप भएको थियो । सोही क्रममा शाही बेपत्ता भएको परिवारको दाबी छ । शाही नेकपा एमाले समर्थक परिवारको सदस्य भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
रोहिणी पुलबाट खोलामा बस खस्दा ९ जनाको मृत्यु
मृतकमध्ये एक जना महिला र अरु ८ जना पुरुष रहेका छन् । उनीहरूको सनाखत भइसकेको छैन । दुर्घटनामा घाइतेहरूको भैरहवाको भीम अस्पताल र मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।
‘हाम्रो संगठनात्मक आधार हुँदाहुँदै, हामीले गठबन्धनमा रहेर इमान्दारिता देखाउँदा देखाउँदै कतिपय ठाउँमा हामीमाथि धोका भएको हो कि ? अथवा हाम्रो शक्ति सम्पूर्ण रुपमा परिचालित नभएको हो कि ? जे हो सत्य तथ्यमा आधारित भएर निष्कर्ष निकालेर त्यसैका आधारमा निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने।
रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइयो (तस्बिरहरू)
मीननाथको रथ लगनखेलको थटी चोकबाट जाउलाखेल पुगेको तथा जाउलाखेल पुगेको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा रहेअनुसार शनिबार देखाइएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा भोटो देखाइएको छ ।
सर्वनाम शिक्षालयका होस्टल वार्डेनमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप, प्रिन्सिपल प्रहरी नियन्त्रणमा
महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका डीएसपी ढुण्डीराज न्यौपानेले आरोपित होस्टल वार्डेन फरार रहेको बताए । प्रहरीले सर्वनाम शिक्षालयका प्रिन्सिपल शिवाकोटी र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।